बिजय शाहीले काठमाडौँमा घर पाएपछि पुण्य गौतम ३ छक्क, बिजयलाइ दिए कडा जबाफ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 30, 2021 AdminLeaveaComment on बिजय शाहीले काठमाडौँमा घर पाएपछि पुण्य गौतम ३ छक्क, बिजयलाइ दिए कडा जबाफ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ। कालीकोटका विजय शाहीले मेमोरी किङ विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि निकै चर्चामा आएका छन्। शाहीले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द सम्झिएर भनेपछि भारतका प्रतियोगीलाई पछि पार्दै विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएका हुन्। विजय शाहीलाई विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि नासाले बोलाएरको छ।
काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।यस्तो फरक प्रतिभालाई भाग्य न्याैपानेले लिएर आउनु भएको छ कि जुन भिडियो हेर्दा जो कोहि अचम्ममा पर्नु हुनेछ, यी युवा कालिकोटका १९ बर्षका बिजय शाही हुन्। बिजय शाही संसारकै धेरै सम्झिन सक्ने क्षमता भएका च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड (Champions book of World Records) प्राप्त ब्यक्ति हुन्।